Madaxweynaha Tansaaniya wuxuu u taagan yahay dalxiiska iyo warshadaha safarka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Tansaaniya » Madaxweynaha Tansaaniya wuxuu u taagan yahay dalxiiska iyo warshadaha safarka
Guddiga Dalxiiska Afrika • Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Investments • News • Dib-u-dhiska • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Madaxweynaha Tansaaniya Samia Suluhu Hassan waxay qaadaysaa talaabooyin dhab ah oo dib loogu qaabeynayo dalxiiska iyada oo loo marayo istiraatiijiyado xayeysiis ah oo xamaasad leh oo tartan leh iyada oo la dhisayo alaab dalxiis oo cusub.
Madaxweynaha ayaa dejinaya himilada 5 milyan oo soo booqda 5ta sano ee soo socota.
Dawladda Tansaaniya waxay soo jiidanaysaa maalgashi hudheel iyo dalxiis iyada oo la ballaadhinayo goobaha booqashada dalxiisayaasha.
Waddanku wuxuu aqoonsan doonaa waddamada istiraatiijiga ah inay suuqgeeyaan dalxiiskiisa iyada oo loo sii marayo xafiisyada diblomaasiyadeed ee hadda jira iyo safaaradaha, iyada oo si xarago leh loogu suuq geynayo wax soo saarkooda safari heer caalami ah.
Markii ay la hadlaysay baarlamaanka caasimadda cusub ee Tansaaniya ee Dodoma, Madaxweynaha Tansaaniya waxa ay sheegtay in dowladdeeda ay hadda soo jiidaneyso dalxiisayaal badan iyada oo u mareysa xeelado xayeysiin suuq-geyn ah oo heer caalami ah.
Madaxweynaha ayaa sheegtay in dowladeedu ay rajaynayso inay tirada dalxiisayaasha ka kordhiso 1.5 milyan ilaa 5 milyan oo soo booqda 5ta sano ee soo socota.
Isla khadkaas, ayay dawladdu rajaynaysaa inay ka soo xajiso dakhliga dalxiiska ee hadda $ 2.6 bilyan illaa 6 bilyan oo doollar isla muddadaas, ayay tidhi.
Si loo gaaro himilooyinkeeda la higsanayo, dowladdu waxay hadda soo jiidanaysaa maalgashiyada hudheellada iyo dalxiiska iyada oo la ballaadhinayo goobaha booqashada dalxiiska, inta badan goobaha taariikhiga ah iyo xeebaha badda, iyo goobaha kale ee aan marna si buuxda loo horumarin si loo soo jiito dalxiisayaasha.